Madaxweyne Walaalkii Ra'iisul Wasaare U Magacaabay Iyo Dalka Uu Yahay
Thursday 21st November 2019 09:13:04 in Wararkii Maanta by Xafiiska Hargeysa
Madaxweynaha cusub ee dhawaan loo doortay dalka Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa, ayaa walaalkii Mahinda u magacaabay Ra'isul wasaaraha cusub ee dalkaasi.
Afhayeen xukumadda cusub u hadlay wuxuu sheegay Mahinda oo laba wareeg oo hore madaxweyne soo noqday ayaa isaga laftiisa walaalkii ka yar u dhaarinaya Ra'isal wasaaranimo.
Eedeymo badan oo la xidhiidha dambiyo dagaal ayaa ciidamada dalkaasi loo soo jeedinayey tani iyo marka uu dhammaaday dagaalki sokeeye.
Madaxweynaha cusub ee loo doortay Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ayaa walaalkii Mahinda u magacaabay Ra'isal wasaaraha dalkaasi.
Mahinda ayaana sida oo kale la filayaa Khamiista in xilka Ra'isal wasaaranimada loo dhaariyo.
Doorashada ka dhcaday Dalka Sri Lanka
Doorashada madaxtinimada ee ka dhacday dalka Sri Lanka waxaa u tartamay ilaa 35 musharax waana doorashadii Saddexaad tan iyo 2009-kii markii uu dhammaaday dagaalkii sokeeye ee dalkaasi ka socday muddo tobanaan sano ah.
Doorashada oo ugu dambeynti uu ku guuleystay wasiirki wasaaradda Gaashanaadhigga Gotabaya Rajapaksa loollan adag uu la galay Sajith Premadasa.
Aminga guud ee dalka ayaa la sheegayaa inay tahay arrinta ugu weyn ee ay daneynayaan, hase yeeshee sinnaanta dadka laga tirada badan yahay iyo shaqa la'aanta ayaa iyagana waxay ka dhex guuxeysaa Maskaxda codbixiyeyaasha.
Mr Rajapaksa waxa uu sheegay inuu soo celinayo xidhiidhka shinaha iyo Sri Lanka.
Dalka Sri Lanka waa Jamhuuriyad Shuuci ah oo ay ku taalla jasiirad dhacdo Koonfurta Aasiya oo ay ku nool yihiin ku dhawaad 6 malyan oo qof.
[Xasaasi:-] Shirkii Dhuusamareeb Oo Gooni Isutaaga Somaliland Laga Tageeray Iyo Madaxweyne Ku Dhiiraday Qadiyada Somalil